Chocolate Chip Cookie – Thet Nandar
မနက်စာ ကော်ဖီ နှင့် တွဲစားဖို့ ချောကလက် ကွတ်ကီးလေးပါ …. အိမ်က ကလေး ၂ယောက် ကတော့ အရမ်းကို ကြိုက်ပေါ့ … သူတို့က ချောကလက် ပိုများတဲ့ ကွတ်ကီးကို ရွှေး စားနေကြပါတယ် ….
အိမ်မှာ ချက်သော ချောကလက် ကွတ်ကီးလေးများ
❏ ချက်၊ စားနည်း
Family Dollar ဆိုင်မှာ တွေ့လို့ ၀ယ်လာသော အတိုင်းအတာ ခွက် နှင့် ဇွန်းလေးများ … ရန်ကုန်၊ စီးတီးမတ်မှာလည်း ၀ယ်လို့ ရပါတယ်။
၀ါယာကျိုး နှင့် အမျိုးမျိုးကို ဖြတ်လို့ရတဲ့ ကတ်ကြေး … US 1 $ ပဲ ပေးရပါတယ်။
ကိုယ် .. အမေရိကားမှာ ယာယီလောက်ပဲ နေထိုင်ချင်တာမို့ ( ကံတရားကတော့ ဘယ်လို လာမလဲး မသိပါဘူး ) ….
ဈေးလည်း သိပ် မကြီးတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံး ပစည်းလေးတွေ လောက်ပဲ ၀ယ်တတ်တယ်။ အရမ်း ဈေးကြီးတဲ့ smart kitchen appliances တွေတော့ မ၀ယ်ဘူး။ အရမ်းကို ဈေးကြီးတာပဲ … ရာ ဂဏာန်းကနေ ဒေါ်လာ ထောင်ချီ နီးပါးလောက် ရှိပါတယ်။
ဒါလေးက ပေါင်မုန့်တို့ အီကြာကွေးတို့မှာ ထည့်တဲ့ Yeast … ကိုယ့် FB ( USA ) a/c က တယောက်က morning burn ပန်းပွင့်ပုံ ပေါင်မုန့်ဖုတ် ထားတာ ကြည့်ပီး ပန်းပွင့်ပုံ ပေါင်မုန့် ဖုတ်ချင်လို့ ၀ယ်လာတာပါ။
အီကြာကွေးလည်း လုပ်လို့ ရပါတယ် …. လွယ်လည်း လွယ်တယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ morning burn ဆိုပီး ရှာလိုက်ရင် အလွယ်တကူ တွေ့နေရပါတယ် …
ပေါင်မုန့် အပေါ်မှာ ဖြူးဖို့ နှမ်းလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဂျုံမှုန့် ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သော မုန့် အမျိုးမျိုး
သကြား အညို ဖြင့် ပြုလုပ်သော ကိတ်ခြောက် ပုံစံ ၊ မုန့်အ၀ိုင်း လုပ်နည်း အညွန်း
အရင်ဦးဆုံး oven ကို 375ºF ကြိုဖွင့်ထားလိုက်ပါတယ်။
မွှေမယ့် ကြွေဇလုံထဲ …
ချောကလက် – ၂ခွက် ထည့်ပီး ရောမွှေထားလိုက်ပါတယ်။
ချောကလက် ထည့်မွှေအပီး ….
TBS – ထမင်းစားဇွန်း ပမာဏ ဇွန်းနဲ့ ကွတ်ကီး မုန့်နှစ်တွေ ခပ်ပီး ကွတ်ကီး မုန့်ဖုတ်တဲ့ စကူ (paper) ပေါ်မှာ ၁ လက်မခွဲ အကွာစီ နေရာချပေးထားလိုက်ပါတယ်။
ခပ်ကြီးကြီး ကွတ်ကီးတွေကိုတော့ ရေခဲမုန့် ခပ်တဲ့ ဇွန်းနဲ့ ခပ်ပီး တစ်လက်မခွဲ အကွာ စီ နေရာ ချပေးထားလိုက်ပါတယ် ….
အိမ်က ကလေးများက အရမ်းကြိုက်တယ်။ သူတို့ ကိုယ်တိုင် ကွတ်ကီးမုန့် ဖုတ်တဲ့ နေရာမှာလည်း ၀င်ကူညီပေးတယ်။ ကလေးတွေ လုပ်ချင် ကိုင်ချင်စိတ် ရှိတုန်း … သူတို့ကို ကိုယ်တိုင် မုန့်ဖုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါမှ ချက်၊ ပြုပ်တဲ့ နေရာမှာ သူတို့ စိတ်ပါလာမှာပါ ….
ကလေးတွေက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဂျုံတွေနဲ့ အရုပ်လုပ်တာ … ဂျုံတွေကို ပြားပြားလေး လိမ့်တာ ဆော့နေကျဆိုတော့ … ကွတ်ကီးမုန့်လောက်က သူတို့ ဆော့နေကျ ကစားနည်းလို ဖြစ်နေတယ်။
Daylight saving time ….
အခုရက်ပိုင်း မအားတာနဲ့ ပိုစ့်တွေ မတင်ဖြစ်ဘူး ….
ဒီနေ့ည .. အမေရိကား ( အရှေ့ဘက်ခြမ်း ) … မှာ အချိန် ၁ နာရီ ရှေ့တိုး မှာမို့ … အမှီ တင်လိုက်တယ်။
ဟိုတလောက … အောက်တိုဘာ စနိုး မုန်တိုင်း ကြောင့် စတိတ်မှာ မီးပျက်သွားတာမို့ …
11.06.2011 – 2:00 a.m – ၁ နာရီ အနောက်ဆုတ်တာမို့ 11.06.2011 – 1:00 a.m ဖြစ်သွားတယ်။
အမေရိကား ( အရှေ့ဘက်ခြမ်း ) …မှာ အချိန် ၁ နာရီ အနောက်ဆုတ်တဲ့အချိန်တုန်းက အိမ်မှာ မီးပျက်နေလို့ ပိုစ့် မတင်ခဲ့ရဘူး …
ဒီတခေါက် … အချိန် ၁ နာရီ .. အရှေ့တိုး တဲ့ နေ့ရက်မှာ .. အိမ်မှာ မီးလာတယ်။
အဓိက က … ကိုယ့် ဆီမှာ 3.10.2012 – 2:30 a.m ဆိုတာ မရှိပါဘူး …
ဒီည … 3.10.2012 – 2:00 a.m အချိန်မှာ 3:00 a.m တန်းဖြစ်သွားမှာပါ ….
ဒီညဆို စင်ကာပူ အချိန်နဲ့ ပြန်တူသွားတော့မှာပါ … နေ့ နှင့် ည ပဲ ကွာတယ်။ အချိန် ကတော့ တူနေမှာပေါ့နော် …
နေ့တာတိုပီး ညတာ ရှည်တဲ့ လတွေက တစ်နာရီ အနောက်ဆုတ်ပီး
နေ့တာရှည်ပီး ညတာတိုတဲ့ လတွေက တစ်နာရီ အရှေ့တိုးသွားတယ် ….
စပျစ်သီးခြောက် ကွတ်ကီး နှင့် အသဲပုံ ကွတ်ကီး
သမီး Angel ကိုယ်တိုင် လုပ်ထားသော 2012 အတွက် သမီးရဲ့ မွေးနေ့ကိတ်မုန့်
မီးမရှိတဲ့ မြို့တော် CT … Connecticut – Medical University – Ucon
2011, October Snow Storm နောက်ပိုင်း … Connecticut မြို့ရဲ့ အခြေအနေ
ကိုယ် မအားလို့ …. မုန်ညင်းချဉ်ဟင်းရည် ပိုစ့် နှင့် ကြက်ခြေထောက် ချဉ်စပ် ဟင်းရည်ပိုစ့် နောက်များမှ တင်ပါမည် … ကိုယ့် ဘလော့ side bar မှာ Recipe blog များ အများကြီး ရှိပါသည် …
March 10, 2012 Thet Nandar
4 thoughts on “Chocolate Chip Cookie”
ဟုတ်တယ် တီတီ.. လုပ်ခိုင်းတဲ့အကျင့်ရှိတော့ ကလေးလေးတွေလည်း လုပ်တတ်တာပေါ့.. နို့မို့ဆို ကန်ဒီ့လိုဖြစ်သွားမယ် ဟီးဟီး
အချိန်တွေက အဲ့လိုတွေလား ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်တွေ.. ဒါဆိုအချိန်တွေ ပျောက်နေမှာပေါ့ 😛 😀
ကလေးတွေက သူတို့ ဂျုံ အရုပ် လုပ်ပုံ လုပ်နည်းနဲ့ တူနေတာလေ …
မာမီက ဂျုံ ကို ဒလိမ့်တုံးနဲ့ လိမ့်နေတာ တွေ့ရင် .. တူတူပဲ … တူတူပဲ ဆိုပီး အတင်းကို ဂျုံ ဆော့နေချင်တော့တာ …☺ cookie cutter လေးတွေနဲ့ ဖြတ်တာလည်း .. သူတို့ အရုပ်တွေ အတိုင်းပါပဲ …
ဟုတ်ပါ့ … မနေ့ညက တနာ၇ီ လောက် အချိန်ပျောက်နေတော့ … တီတီ မနေ့ည က အိပ်ချိန် တနာရီလောက် လျှော့သွားတယ် …
မနေ့ည အိပ်ချိန် ⌚ ၁၀ နာရီ အိပ်လိုက်တယ်ဆို ..
ဒီနေ့ မနက် ၆ နာရီ ထတော့ အရင်ညတွေလို အိပ်ချိန် ၈ နာရီ မဟုတ်တော့ပဲ ⌛ ၇ နာရီလောက်ပဲ အိပ်လိုက်ရတယ်။ ဟီး ဟီး 😛 ㋡ ㋡
۩ အိမ်လာလည်တာ ကျေးဇူးနော် Candy ⒸⒶⓃⒹⓨ …..
ကျောင်းမှာလည်း အဲဒီကွတ်ကီး ကျွှေးတယ်…လွယ်သားနော်..
ဟုတ်တယ် .. ကွတ်ကီးမုန့်ကလေ .. ဖုတ်ရတာ လွယ်လွယ်လေးပါပဲ … မုန့်ဖုတ်တာလည်း အလွန်ဆုံး ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲ ကြာတာမို့ မုန့်ဖုတ်တာလည်း မြန်တယ် ….